बलिउडका चर्चित अभिनेत्रिहरु जो आफ्नो स्तनमा छुन खोज्ने पुरुषहरुसँग यसरी डराएर रोए !! - Experience Best News from Nepal
धेरैजसो अभिनेत्रि यौन हिंसामा परेका हुन्छन् । भारतीय चर्चित अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यौन दुब्र्यबहारको शिकार बन्दा भक्कानिएर रोइन् । चर्चाको शिखरमा पुगेका बलिउडका नायिकाहरुले आफुले भोगेको यौन हिंसा तब खोले जब उनीहरु स्थापीत भए ।
लामो समयपछि तन्नुश्री दत्ताले पनि आफुमाथी नानापाटेकर ले यौन हिंसा गरेको पोल खोलिन् । अहिले आएर खोल्नुको पछाडीको रहस्य नखुलीरहेका बेला अन्य चर्चित नायिकाहरुले पनि आफुमाथी भएको दुब्र्यबहारको रहस्य एकपछि अर्को गर्दै खोलीरहेका छन् ।
चर्चित बलिउड सुन्दरी नायिका २०१३ मा इभेन्टमा सहभागी भएर बाहिर निस्किँदै थिइन् सो समय उनीमाथि सर्वसाधारणले दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए ।त्यस्तै अर्की चर्चित नायिका कट्रिना साउथ कोलकाताको एक दुर्गा पूजाको उत्सवमा सहभागी भएर सकिएपछि त्यहाँका केही व्यक्तिले उनीमाथि दुव्र्यवहार गरेपछी उनी पनि आत्तिएर रोएकी थिइन् । त्यस्तै अर्की नायिका अमिषा पटेलले आँफुलाई यौन दुब्र्यबहार गर्ने युवकलाई झापड हानेर आफ्नो बाटो लागेकी थिइन् ।
कट्रिनालाई त्यस कारण सलमानले हानेका रहेछन झापड !! सलमान आफैले खोले राज
विद्यालय नगएका यी चर्चित ५ बलिउड कलाकारहरु
सलमानले रोमान्स गरेका यी ७ चर्चित अभिनेत्रीहरु, जो सलमानले फिल्ममा डेब्यू गर्दा थिए बच्चा ? (हेर्नुहोस् तस्विरहरु)
Katrina KaifSonakshi Sinha